दसगजा नचलाउन प्रलोभन « Nepal – the country of Mt. Everest and Buddha
« भारतले १५ करोड मालपोत नेपाललाई तिरेन
Gurkha hero and activist Tul Bahadur Pun dies in Nepal »
दसगजा नचलाउन प्रलोभन
By लक्ष्मण सुवेदी
मैले आफ्नै भूमिमा टेकेर फोटो खिचिरहेको थिएँ । एक्कासि भारतीय सीमा सुरक्षा एसएसबीले आएर मलाई धम्क्यायो । मैले खिचेको फोटो डिलिट नगरेसम्म त्यहाँबाट उम्कन नदिने धम्की दियो । मैले आफ्नो भूमिमा उभिएर फोटो खिच्न नपाउनु भनेर तर्क गरेँ । तर, उनीहरूले मलाई देश तेरो भए पनि यहाँ शासन हाम्रो चल्छ भन्यो । मैले बाध्य भएर फोटो हटाउनुपर्‍यो ।
नवल खड्का राष्ट्रवादी फिल्म बनाउने निर्मातामा पर्छन् । भारतले गरिरहेको नेपालको सीमा अतिक्रमणको विषयमा दसगजा र त्यसअघि जनयुद्धको विषयमा आवाज नामक फिल्म निर्माण गरेका उनी अहिले दसगजाका कारण बढी चर्चामा छन् । दसगजा सार्वजनिक प्रदर्शनको संघारमा छ । सुरुमा अभिनयबाट नेपाली फिल्म क्षेत्रमा प्रवेश गरेका नवल बीचमा निर्देशक हुँदै निर्माता बनेका हुन् । मायाप्रेमकै सेरोफेरोमा घुमेका फिल्ममा अभिनय गर्दागर्दै जान्ने-बुझ्ने भएपछि उनी आफ्नो अभिनय तथा निर्माणको धार बदलेको बताउँछन् । दसगजापछि सहिद भीमदत्तको जीवनीमा आधारित फिल्म भीमदत्त निर्माण गर्न लागेका नवलसँग उनको फिल्मयात्रा र परिवर्तित धारका बारेमा गरिएको कुराकानीः
विद्यार्थी राजनीति गरिरहेको मान्छे, फिल्म क्षेत्रमा किन लागेको ?
म सानैदेखि प्रगतिशील विचारधाराको थिएँ । खोटाङमा स्कुल पढ्दाखेरि नै म राजनीतिप्रति आकषिर्त भएँ । देश र जनताका लागि राजनीतिको माध्यमबाट केही गर्नुपर्छ भन्ने सोच थियो । तर, बुभ\_mदै जाँदा कुरा अर्कै भएको सुइँको पाएँ । नेताको झोला बोकेर हिँड्दा व्यक्ति मात्र मोटाउने, देश र आमजनताका लागि केही फाइदा नहुने देखेँ । नेताहरूको अदूरदर्शिता, अक्षमता, पद लोलुपताले गर्दा देश र जनताप्रति जिम्मेवार नभएको पाएँ । जसले गर्दा राजनीतिदेखि वितृष्णा जाग्यो । तर, म सधैँ देशका लागि केही गर्नैपर्छ भन्ने कुरामा अडिग थिएँ । राजनीति गतिलो लागेन । अनि मैले सोचेँ, फिल्मको माध्यमबाट आमनेपालीमा पुग्न सकिन्छ । फिल्म आमनेपालीसमक्ष पुग्ने सशक्त माध्यम भएकाले मैले फिल्म क्षेत्रमा लाग्ने निर्णय गरे । मेरा साथीभाइले पनि मलाई फिल्म क्षेत्रमा लाग्नु प्रेरित गरे । आफूले चाहेको सन्देश फिल्ममार्फत दिन सकिन्छ भन्ने लागेर यो क्षेत्रमा प्रवेश गरेँ । मलाई विश्वास थियो कि म फिल्ममा जसरी प्रवेश गरे पनि कालान्तरमा मैले लक्ष्य हासिल गर्नेछु ।
सुरुमा त लभस्टोरी फिल्ममै मस्त हुनुभयो, हैन ?
मैले ०५३ सालमा गुन्युचोली नामक फिल्मबाट अभिनय यात्रा सुरु गरेको हुँ । त्यसै क्रममा मैले अधुरो प्रेम, चन्द्र-सूर्यलगायतका भिडियो फिल्ममा अभिनय गरेको थिएँ । पहिला फिल्म क्षेत्रमा कसरी प्रवेश गर्ने र कसरी स्थापित हुने भन्नेमै तनाब भयो । त्यतिवेला फिल्ममा प्रवेश गर्न अहिलेजस्तो सहज थिएन । म जहिले पनि प्रगतिशील विचारको भएकाले नेपाली मौलिक भेषभुषा गुन्युचोली नाममै बनेको फिल्मबाट ठूलो पर्दाको अभिनय सुरु गरेँ । त्यसपछि पनि मैले मनै त हो, तिम्रा लागि, क्रान्ति, किन माया लाएछु, देशद्रोही, माया बसेछलगायतका मायाप्रेमकै विषयका फिल्ममा अभिनय गरेँ । ती फिल्मबाट मैले धेरै कुरा सिकेँ । फिल्मको प्राविधिक ज्ञानदेेखि लिएर भाषा पनि जान्न र बुझ्न पाएँ । बीचमा मैले विश्वासघात नामक फिल्म पनि निर्देशन गरेँ । तर, त्यो फिल्मका निर्माता विदेशतिर लागेकाले अहिलेसम्म रिलिज हुन सकेको छैन । यी सबै भोगाइले नै मलाई अनुभवी बनाए । जसकारण मैले आवाज र दसगजा निर्माण गर्न सफल भएँ ।
म पहिले नै मुलुक र आमनेपालीका जल्दाबल्दा समस्या उठान गरिएका फिल्ममा काम गर्न चाहन्थेँ । तर, त्यतिवेलाको शासन पद्धतिले वातावरण सहज थिएन । र, लगानी पनि सुरक्षित थिएन । जसकारण मैले नचाहेर पनि सस्तो मनोरञ्जन प्रदान गर्ने फिल्म गर्नुपर्‍यो । मैले निर्माण गरेको पहिलो फिल्म माया बसेछ पनि त्यसकै उपज हो ।
माओवादी जनयुद्धका बारेमा आवाज बनाउनुभयो, त्यस्तो विषय उठाउनु कारण के थियो ?
मैले दस वर्षीय जनयुद्ध र १९ दिने महान् जनआन्दोलनमा आधारित भएर आवाज बनाएको हुँ । आवाज मुलुकको परिवर्तनका लागि शहादत प्राप्त गरेका १४ हजार बढी नेपाल आमाका सन्तानप्रति श्रद्धाञ्जलीस्वरूप निर्माण गरेको हुँ । मैले जुन उद्देश्यले लिएर आवाज बनाएको थिएँ, त्यसमा सफल भए । आमनेपालीले आवाज मन पराए । त्यतिवेला जनयुद्धको पृष्ठभूमि टेकेर थुप्रै फिल्म बनाएँ । तर, नेपालीले मन पराएको फिल्म आवाज नै हो । आवाजको सफलताले नै मलाई दसगजा बनाउने प्रेरित गरेको हो ।
दसगजा बनाउने सोचाइ कसरी आयो ?
भारतले हाम्रो मुलुकको भूमि मात्र अतिक्रमण गरेको छैन । संस्कृति पनि अतिक्रमण गरेको छ । भारतले फिल्ममार्फत पटक-पटक नेपाल र नेपालीलाई होच्याउँदै आएको छ । यसको प्रत्यक्ष उदाहरण उनीहरूले बनाएको घरवाली बहारवाली, चाँदनी चोक टु चाइनालगायतका फिल्म छन् । जसमा नेपाल र नेपालीसम्बन्धी भ्रम फैलाइएकोछ । त्यति मात्र नभई कहिले माधुरी दीक्षितले हाम्रो देशलाई भारतको प्रान्त भन्ने त कहिले गौतम बुद्ध भारतमा जन्मिएका हुन् भनेर इतिहास मेट्ने कुत्सित मानसिकता देखाउने गरेका छन् । जसका लागि हामीले फिल्ममार्फतै जवाफ दिन जरुरी थियो । त्यसका लागि पनि भारतले गरिरहेको अत्याचारका बारेमा फिल्म बनाएर आमनेपालीमा चेतना फैलाउनु थियो । त्यसकारण पनि दसगजा बनाउनु जरुरी थियो । मैले भारतले गरेको हाम्रो देशको सीमा अतिक्रमण र त्यसबाट पिल्सिएका नेपाल दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीको पीडा नजिकबाट महसुस गरेको थिए । खासमा हाम्रो सिमाना टिस्टादेखि काँगडासम्म हो । अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा गई मुद्दा लडेमा जित हाम्रो हुन्छ । तर, हाम्रो सिमाना मेची-कालीमा सीमित गरिएको छ । भारतले नेपालको ५४ ठाउँमा एक लाख १२ हजार हेक्टर जमिन मिचेको छ । त्यति मात्र नभई सीमाक्षेत्रमा बस्ने नेपाली चेलीको अस्मिता लुटेको छ । नेपालीको पसिनाले आर्जेको अन्नबाली भारतीयले लुटेर खाइरहेका छन् । देश र जनताको यस्तो अवस्था हुदा नेपाल सरकार भने मूक दर्शक भई ताली बजाइरहेको छ । मुलुकको हरेक जिम्मेवार नागरिकले यसबारेमा आवाज उठाउनुपर्छ । त्यसका लागि आमनेपालीलाई जागृत गर्नका लागि दसगजा बनाएको हुँ ।
दसगजा निर्माणताका निकै सास्ती खेप्नुपरेको सुन्नमा आएको थियो, के-के भोग्नुपर्‍यो ?
दसगजा निर्माण सुरु गर्दा देखि नै मैले विभिन्न किसिमको तनाब, झमेला, धाकधम्की खेप्दै आइरहेको छु । अहिले सार्वजनिक प्रदर्शनको संघारमा पनि मलाई विभिन्नप्रकारका धम्की, प्रलोभन आइरहेका छन् । म सुटिङ लोकेसन हेर्नका लागि सुस्ता गएको थिएँ । त्यहाँ भारतले नेपालको १४ हजार हेक्टर जमिन अतिक्रमण गरेको छ । मैले आफ्नै भूमिमा टेकेर फोटो खिचिरहेको थिएँ । एक्कासि भारतीय सीमा सुरक्षा एसएसबीले आएर मलाई धम्क्यायो । मैले खिचेको फोटो डिलिट नगरेसम्म त्यहाँबाट उम्कन नदिने धम्की दियो । मैले आफ्नो भूमिमा उभिएर फोटो खिच्न नपाउनु भनेर तर्क गरेँ । तर, उनीहरूले मलाई देश तेरो भए पनि यहाँ शासन हाम्रो चल्छ भन्यो । मैले बाध्य भएर फोटो हटाउनुपर्‍यो । पछि युनिट लिएर सुटिङ गर्न सुस्ता पुगेँ । उनीहरूले फेरि मलाई कसको अनुमति लिएर सुटिङ गर्न आइस् ? भनेर त्यहाँ सुटिङ नै गर्न दिएनन् । त्यहाँ सुटिङ हुन नसकेपछि त्रिवेणी आयौँ । त्रिवेणीमा नाइट सुटिङ गर्न लाग्दा बत्ती निभाएर अवरोध गरे । त्यहाँ सुटिङ गर्दा भारतीय सञ्चारमाध्यमले नवल खड्काले भारतविरोधी फिल्म बनाइरहेको छ भने गलत अफवाह फैलाए ।
सुटिङ बल्लतल्ल सकियो । त्यसबीचमा केही मान्छेले नवलले पाकिस्तानको पैसामा भारतविरोधी फिल्म बनाएको छ भनेर कपोलकल्पित हल्ला पनि फैलाए । मैले एकजना पाकिस्तानी पनि चिनेको छैन । बरु केही भारतीयसँग नै राम्रो चिनजान छ ।
सेन्सरको वेला पनि निकै झमेला बेहोर्नुपर्‍यो । सेन्सर बोर्डले चारचोटिसम्म कैँची चलायो । फिल्मका २९ संवाद र चार दृश्य काट्यो । त्यति मात्र नभई सेन्सर सर्टिफिकेट दिने बेला बोर्डका पदाधिकारीले अहिले फिल्म पास भयो भनेर ढुक्क भइनहाल्नु, पछि फेरि लफडा पर्न सक्छ भन्ने डर देखाए । दसगजाको अहिलेसम्म मुलुकका ५५ भन्दा बढी ठाउँमा च्यारिटी शो भइसकेको छ । च्यारिटीको वेला एकजनाले भारतीय राजदूतावासबाट फोन गरेको भन्दै मलाई दसगजा कस्तो फिल्म हो भनेर धम्क्याउने कोसिस गरेको थियो । मैले साफसाफ बताइदिएपछि उसले फेरि फोन गरेन ।
दसगजा रिलिज रोक्नका लागि मोटो रकम अफर आएको छ भन्ने सुन्नमा आएको छ, कुरा के हो ?
मेरो फिल्म ९ वैशाखदेखि रिलिज हुदै छ । यो अवस्थामा ‘रअ’का केही एजेन्टले मेरोबारेमा बुझ्दै हिँडेको थाहा पाएको छु । भारतीय राजदूतावाससँग आफ्नो राम्रो सम्बन्ध रहेको बताउने केही व्यक्तिले मलाई पहिला दुई करोड रुपैयाँको प्रलोभन देखाएको थियो । अहिले बढाउँदै गएर चार करोड पुर्‍याएको छ । उनीहरूले मैले पत्रकार सम्मेलन गरेर दसगजाको हार्डडिस्क या रिल खराब भएकाले रिलिज हुन नसक्ने बताउनुपर्ने सर्तसमेत राखेका छन् । तर, म कुनै पनि हालतमा कसैको प्रलोभनमा पर्दिनँ । फिल्म प्रदर्शनमा जान लागेको वेला संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय व्युरोले दसगजा हेर्न रुचि देखाएको खबर आएको छ ।
दसगजाको मूख्य सन्देश के हो ?
दसगजा भारतको विरोधमा बनाएको फिल्म होइन । फिल्मले दुई छिमेकीबीचको समस्या कूटनीतिक तवरबाटै समाधान गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिएको छ । दसगजामार्फत हामीले १८१६ को सन्धि पुनरावलोकन गर्नुका साथै १९५० को सन्धि खारेज गर्नुपर्छ भन्ने आवाज उठाएका छौँ । यो पौने तीन करोड नेपालीको माग हो । दसगजाले भारत र नेपालबीचको मित्रतामा कुनै दख्खल पुर्‍याउँदैन ।
This entry was posted on April 17, 2011 at 10:53 am	and is filed under अन्तरबार्ता. Tagged: काँगडा, गौतम बुद्ध, घरवाली बहारवाली, चाँदनी चोक टु चाइना, जन आन्दोलन, टिस्टा, दशगजा, भारतीय सीमा सुरक्षा एसएसबी, माओवादी जनयुद्ध, माधुरी दीक्षित, सहिद भीमदत्त, सीमा अतिक्रमण, १९५० को सन्धि. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.